Global Voices teny Malagasy » Brexit: Vaky Fo, Fa Tsy Vaky (Potika) · Global Voices teny Malagasy » Print
Brexit: Vaky Fo, Fa Tsy Vaky (Potika)
Voadika ny 25 Jona 2016 7:21 GMT 1	 · Mpanoratra Zara Rahman Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Andrefana, Angletera, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifidianana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Ny Tetezana - The Bridge
Brexit? Londra, UK 2016. SARIPIKA: Tomek Nacho (CC BY-ND 2.0)
Nomen'ny marainan'ny rahon'ny tsy finoana lalana ny alahelo. Misaona aho, ary tahaka izany koa ny olona farafahakeliny 16 tapitrisa manodidina ahy. Tsy ho an'ny Vondrona Eoropeanina ihany, fa ho an'ny fijoroana mivondrona amin'ny fanoherana ny horohoron'ny tontolo ankehitriny, fa ho an'ny firenena izay nahalehibe ahy ihany koa.
Naha-ana ny nanaraka ny referendum. [Naha-ana] ny manenja-tena raha misy olona eo an'efi-trano manonona UKIP , na Brexit . [Naha-ana] ny tsy maintsy niteny tamin'olona iray “fa mpanavakava-bolonkoditra ry zareo” ka tsenain'ny “fa misy dikany ny hevitra ara-toekarendry zareo” avy amin'olona nohajaiko taloha—sy ny mahatsapa avy amin'ny tena hatrany fa maro amintsika no tsy manana olana amin'ny tsy firaharahiana ny fahateren-tsaina rehefa mety amintsika izany. Raha mahalala ny toe-draharaha politika fony tonga avy any Bangladesh tamin'ny taompolo 70 ny ray aman-dreniko, dia tahaka ny hoe tsy azo natao ny nihalehibe tao amin'ny Fanjakana Mitambatra (UK), na ny manana ireo fanararaotra natolotra ahy nandritra ny fahazazako.
“. . . toe-draharaha politika fony tonga avy any Bangladesh tamin'ny taompolo 70 ny ray aman-dreniko, tahaka ny hoe tsy azo natao ny nihalehibe tato amin'ny Fanjakana Mitambatra (UK), na ny manana ireo fanararaotra natolotra ahy nandritra ny fahazazako.”
Hafahafa ny nijery avy aty ivelan'ny firenena ilay fihetseham-po tsy tia mpifindramonina, tsy tia vahiny nahazo vahana tao amin'ny Fanjakana Mitambatra (UK). Tamin'ny voalohany aho niezaka ny tsy hiraharaha izany. Nanana izay tombony manokana izay aho: Monina eto Berlin aho, tsy dia mahatratra ahy loatra io. Avy eo aho niha-nahatsikaritra hatrany. Nanomboka niresaka azy ity tamin'ny namako aho, ny hanolotena an-tserasera, ary omaly, niverina aho tamin'ny minitra vitsivitsy farany tamin'ny fanentanana hijanonana  [ao anaty vondrona eoropeanina] tamin'ny androm-pifidianana. Afa-mirehareha aho nanao izany, saingy nanenina be tokoa aho fa niandry fotoana ela vao niditra an-tsehatra bebe kokoa.
Manana ahiahy aho fa maro ny olona manana izany fahatsapana izany ihany koa. Ny tsy firaharahiana ny politikan'ny firenentsika no mahatonga antsika ho toy izao ankehitriny. Nampiada-tena loatra isika, ary tsy niditra tamin'ny fanapahan-kevitra sy ny politika izay nampisy fiantraikany goavana tamin'ny fiainantsika. Tsy nahatsapa isika amin'ny zavatra be dia be ho ariantsika, na nilaintsika ho arovana am-pahavitrihana ny zo isitrahantsika, tsy ijerentsika izay fahatsapantsika momba ny antoko politika.
Tamin'ny firesahana tamin'ny namana maro omaly, sambany ny maro tamin'izy ireo no niresaka politika tao amin'ny Facebook noho iny referendum iny. Maro tamintsika no nihalehibe tao anatin'ny tsy fitokisana lalina tamin'ny rafitra politika Britanika. Mahita ireo lahy fotsy hoditra mandeha mankany Eton sy Oxford mitombo an-daharana hampandeha ny firenena, mandeha ary mandeha hatrany, hanao izany ho anao. Miadana tao amin'ny status quo [tsy fanovana na inona na inona] ny maro tao amin'ny tontolo sosialy misy ahy. Tsy mientanentana, fa manao hoe mety; mitolona hividy trano, saingy amin'ny asa maro, ary mandoa tsikelikely ny trosa tamin'ny nianatra oniversite. Averina indray, tombony manokana, ary iray tsy nozarain'ny maro amin'ireo olona manerana ny firenena natao an-jorombala sy tsy nomena zo ny nampiasa ity fotoana ity mba hihainoana amin'izay ny feon'izy ireo.
“Miadana tao amin'ny status quo ny maro tao amin'ny tontolo sosialy misy ahy. Tsy mientanentana, fa manao hoe mety; mitolona hividy trano, saingy amin'ny asa maro, ary mandoa tsikelikely ny trosa tamin'ny nianatra oniversite. Averina indray, tombony manokana, ary iray tsy nozarain'ny maro amin'ireo olona manerana ny firenena natao an-jorombala sy tsy nomena zo nampiasa ity fotoana ity mba hihainoana amin'izay ny feon'izy ireo.”
Misaratsaraka ny firenena. Ny fandrotsaham-bato no naneho izany. Tsy iadian-kevitra ihany koa ny fisarahana eo amin'ny taona, haavom-pianarana, sisintany ara-jeografika. Tsy dia misy idiran'ny antoko politika loatra. Nanapoizina, tsy marina mahakentrona, tsy tompon'andraikitra amin'ny heviny lalina indrindran'ny teny ny lainga sy ny fandisoam-baovao naely nandritra ny fanentanana [fampielezan-kevitra].
Sarotra ihany koa ny mijery hoe inona no mitranga. Iny no fanentanana maloto sy vetaveta indrindra tsy mbola hitako hatramin'izay niainako. Fipoahana mandravarava fanampiny ny namonoana an'i Jo Cox , saingy hoy i Alex Massie, tsy afa-mamerimberina ianao hoe BREAKING POINT [tafahoatra, an-tokonan'ny tsy avotra intsony], ary gaga rehefa misy olona vaky [potika].  Malahelo aho amin'ny valiny, malahelo aho tamin'ny fomba nanaovana ny fanentanana, ary malahelo aho tamin'ny fisongan'ny fihetseham-po elatra havanana miely manerana ny firenena. Tsy ity no firenena nahalehibe ahy.
Ary ankehitriny? Ilay zavamisy toa ela isika vao mahatakatra izay mitranga, vao mandray ny fandrahonana ho matotra, tsy hanosika fotsiny ho amin'ny fiovana fa hiaro izay ankamamiantsika, no zavatra ilaintsika hahatsiarovana fa tsy hamerimberenana. Nanary zavatra be dia be isika omaly, ary tsy hitovy amin'ny taloha intsony ny firenentsika.
Tsy izao no lalana notadiaviko, saingy tsy afa-manary [hanaiky ho resy] ankoatra ny noho izao isika, ary ankehitriny isika mila manao ny tsara indrindra azontsika atao. Mila miara-mijoro ny antoko politika, manohitra ny fijery tery saina, manohitra ny fanavakavahana ary manohitra ny fahadalana misy ankehitriny. Ao anaty fisaonana aho, fa mahatsapa tsara ny anjara andraikitra mavitrika, manandra-peo amin'ny tsy maintsy hisorohana azy ity tsy hibolistra mankany amin'ny ratsy kokoa.
Hoy ny nosoratan'ny namako Sarah androany maraina: Vaky fo aho, fa tsy vaky (potika).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/25/84544/
 fanentanana hijanonana: https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_withdrawal_from_the_European_Union#Campaign_groups
 namonoana an'i Jo Cox: https://en.wikipedia.org/wiki/Killing_of_Jo_Cox
 tsy afa-mamerimberina ianao hoe BREAKING POINT [tafahoatra, an-tokonan'ny tsy avotra intsony], ary gaga rehefa misy olona vaky [potika].: http://blogs.spectator.co.uk/2016/06/a-day-of-infamy/